Khamrigu wuxuu ku xiraa Catenas Rothschilds: Geli CARO Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Khamrigu wuxuu ku xiraa Catenas Rothschilds: Geli CARO Cusub
Wararka Argentina • Jebinta Wararka Safarka • kariska • dhaqanka • Wararka Faransiiska • News • Dadka • Shopping • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Khamriga & Ruuxa
LR - Dr. Nicolás Catena iyo Baron Eric de Rothschild
Xor baad u tahay inaad iigu yeerto khamri! Markaan ogaado in khamri la soo saaray iskaashi dhex maray Domaine's Barons de Rothschilds (Lafite) iyo qoyska reer Argentina Catena - waxaan ka ruxruxaa ceeryaanta maskaxdayda ee COVID oo waan ogahay, maadaama labada qoysba ay ku jireen ganacsiga khamriga tan iyo 1800kii.
Rothschilds waxay sii ballaarinayeen danaha beeraha canabka ah ee ka baxsan Faransiiska tobanaan sano.
Xiriirka Catenas iyo Malbec -kooda wuxuu bilaabmay 1999, qiyaastii 11 sano ka hor (1988), markii Rothschilds ay heleen Vina Los Vascos ee Chile.
Sannadkii 2008, iyada oo lala kaashanayo CITIC-ka Shiinaha, Rothschilds waxay beer-canab ka bilaabeen Penglai, Shiinaha, oo ku taal meel waxyar u jirta Penglai oo ku taal badhtamaha aag 377-hektar oo la ilaaliyo.
Waxa la xuso oo la xuso ee ku saabsan xiriirka ka dhexeeya shirkadda Catena ayaa ah in Jancis Robinson uu u qaddariyo Nicolas Catena Zapata, “… isagoo khamriga Argentina saaray khariidada adduunka.” Larry Stone oo ka tirsan James Beard Foundation ayaa go'aamiyay in Nicolas Catena Zapata ay isku horyaal yihiin Robert Mondavi si loo horumariyo goobta khamriga ee Napa, "isagoo ku dhiirrigelinaya gobol dhan inuu ku dadaalo heer sare oo tayo leh ..."
Calaamadda “Caro” waa isku darka magacyada labada qoys-Catena iyo Rothschild iyo soo gelinta khibradda Rothschild, maalgelinta, suuqgeynta iyo maalgashiyada kale ayaa u saamaxday Catena khamri in ay u gudubto heer kale iyo in ururku sameeyo “ugu quruxda badan khamriga Argentina”(Laura Catena).
Dib u Milicsiga Horay Usoco
Argentina waxay iibisaa kaliya rubuc ka mid ah khamrigeeda caalamka. Waddanku waa soo saaraha khamriga ugu sarreeya Latin America iyo shanaad ee ugu weyn adduunka. Gobolka sii kordhaya ee khamriga, ee dooxooyinka buurta Andean, ayaa inta badan la barbar dhigaa dooxada Napa ee California. Gobollada Mendoza iyo San Juan, oo ah udub -dhexaadka khamriga ee dalka, ayaa si caalami ah loogu xusay Malbec, iyo sidoo kale Bonarda, Syrah iyo Cabernet Sauvignon. Waxaa xiiso leh in la ogaado in Malbec ay mar ahaan jirtay khamri muhiim ah Bordeaux ilaa cudur iyo cayayaan ay horseedeen hoos u dhaca canabka. Noocyada Bordelaise waxaa keenay Faransiiska Faransiis bartamihii 1800-meeyadii halkaas oo lagu farxay. Midkoodna arrimihii ku dhacay Malbec Faransiis ma jiro oo ku yaal buuraha Andes maaddaama beeraha canabka ah ee Argentine lagu beeray xarriiqda dhiqluhu ma faafi karaan oo meelaha buuraleyda ah ayaa bixiya xaddiyo badan oo aan kala go 'lahayn, qorraxda awoodda leh.
Warshadaha khamriga ee Argentina ayaa dawayn gaar ah ka helay dawladda qaranka oo ka ilaalinaysa fowdada dhaqaale ee hadda dalka ka jirta. Dawladdu waxay go'aamisay in khamri -yaasha loo oggolaado inay shaqeeyaan maaddaama khamrigu uu yahay "hawl muhiim ah" oo u oggolaanaysa inta badan khamriga inay shaqeeyaan si aan kala go 'lahayn inta lagu jiro masiibada.
Xayiraadda ayaa kordhisay cabbitaanka khamriga ee dalka taasoo muujineysa koror 7 boqolkiiba marka loo eego 2019 markii iibka khamrigu uu gaarayay ku dhawaad ​​8.83 milyan oo hektar, halka 8.4 milyan oo hektar la diiwaan geliyey 2018. Laga bilaabo Jannaayo ilaa Ogosto 2020 iibka khamrigu wuxuu gaaray 6.21 milyan hectoliters. Marka loo eego qof walba, sannadka 2019, isticmaalka qofkiiba ee khamriga ee Argentina ayaa gaadhay 19.5 litir qofkiiba, halkii uu ka ahaa 18.0 litir qofkii la diiwaan geliyey sannad ka hor. Tani dhab ahaantii way ka farxisay kuwa khamriga sameeya maadaama Argentina ay rubuc ka mid ah khamrigeeda ku iibiso dalka dibaddiisa. Dhoofinta khamrigu waxay korodhay boqolkiiba 21 laga bilaabo Jannaayo ilaa Nofembar marka la barbar dhigo hoos -u -dhaca caalamiga ah ee ku dhawaad ​​6 boqolkiiba (Instituto Nacional de Vitivinicultura).
Qoyska Catena waxay si buuxda u qiimeeyeen ka -dhaafitaankan (sida soo -saare cunto) iyo bilowgii Covid (Maarso 20, 2020) shaqaaluhu waxay xidheen maaskaro iyo galoofyo waxayna galeen beero canab ah si ay u soo ururiyaan canabka hadhay ee goosashada aan caadiga ahayn.
Waxa musiibada u noqday qaybaha kale ee Argentina ayaa u noqotay waayo -aragnimo togan Caro 1 -dii Abriil, Drinks International, waxay ku dhawaaqday in Catena Zapata loo doortay Nooca Khamriga ee Aad Loogu Majeerto (2020) koox caalami ah oo iibsada cabitaannada iyo khubarada khamriga , oo ay ku jiraan xirfadlayaal khamri ah oo ka kala yimid 48 dal oo kala duwan.
Kusoo dhawaada oo Shaqsi ah
Laga soo bilaabo bilowgii qarnigii 20aad (1902) khamriga Catena waxaa lagu yaqaanay inuu ka qaado Malbec taageerada nolosha iyo aqoonsiga qiimaha argagaxa aadka u sarreeya ee ku yaal dhulka hoostiisa Andean ee Mendoza, Argentina.
Nicolas Catena, oo ah jiilka saddexaad ee khamriga khamriga sameeya, ayaa ahaa Argentine-kii ugu horreeyay ee dhoofiya dhalo heer caalami ah oo Malbec leh sumaddii Catena. Maanta isaga iyo gabadhiisa Dr. Laura Catena waxay sii wadaan inay ballaariyaan gaaritaanka khamrigooda Caro. Madaxa khamriga, Alejandro Vigil wuxuu ku biiray Catena Zapata 2002
Beerta Canabka Andrianna waxay ku dhowdahay 5000 fuudh oo loo yaqaan Grand Cru ee Koonfurta Ameerika.
Joogga sare wuxuu ku dhiirri -galiyaa canabkii Malbec inuu yeesho aashitada sidaas darteedna waa ka dhadhan macaan yihiin. Maqaarka qaro weyn wuxuu abuuraa canab aad u urursan oo dhadhan fiican leh, oo dhaliya khamri hodan ah. Maadaama Malbec uu jidh buuxa yahay, firfircoon yahay oo miro ka buuxaan, qaab-dhismeedka iyo dabeecadda la safeeyey ee Cabernet Sauvignon ayaa bogaadinaysa oo wanaajisa khamriga u dambeeya.
Kala duwanaanshaha keli ah ee ay soo saartay Caro waa Aruma iyadoo khamriyada kale ay yihiin isku dar laba canab ah, Malbec (awoodda xirxiridda, dhiirranaanta iyo miraha), iyo Cabernet Sauvignon (qaab -dhismeed wax -ku -biirinta iyo xariifnimada).
Dhammaan canabyada khamriga Caro waxaa lagu soo qaataa gacanta iyo gacanta oo lagu kala soocaa ka hor inta aan la dillaacin oo la jajabiyo taasoo meesha ka saareysa suurtogalnimada canab xumaaday iyo tannic afkoda si ay u galaan isku dhafka, oo abuuraya jawi ku habboon khamri khiyaano leh oo jilicsan.
• Bodegas Caro Aruma (habeen: luuqadda Hindida Mendoza ee hooyo) 2019. Boqolkiiba 100 Malbec oo ka socota Valle de Uco (Altamira, El Peral iyo San Jose). Qaawanayn
Magaca loo xushay inay astaan ​​u tahay mugdiga aadka u daran iyo hawada buuraha nadiifta ah ee habeenada Andean. Waxaa lagu qooyay taangiyada birta ka samaysan iyo kuwa ku jira haamaha sibidhka ee khamriga ku haya heerkul joogto ah. Canabkii Malbec ayaa yimid gudaha Argentina waxaa u mahadceliyay nin beeraley ah oo Faransiis ah oo xusay fursadda canabku si guul leh ugu koraan deegaanka sare ee Mendoza (1868).
Indhuhu waxay qoraan raspberries cas oo mugdi ah halka sanku ka helayo blackberries, basbaaska madow, plomme, miro guduudan, waxoogaa uunsi ah (oo fiican), iyo violets. Farxad leh, khamrigan wuxuu bixiyaa karamberriga, blueberries, iyo xoogaa tannins ah. Tixgeli waayo -aragnimada dhadhanka Malbec ee dhabta ah. Fur dhawr saacadood ka hor intaan kabbaduhu bilaaban markay furmayso oo si deeqsinimo leh u siiso waayo -aragnimo afka oo macaan leh. Ku lammaan farmaajo buluug ah ama digaag duban.
• Bodegas Caro Amancaya (ubaxa buurta Andes) 2018. 70 boqolkiiba Malbec, 30 boqolkiiba Cabernet Sauvignon. Canabka waxaa laga goostaa goos goosyada gaarka ah ee canabka duugga ah ee Lujan de Cuyo, iyo Altamira. In Lujan canab waxaa lagu beeray lakabyo alluvial of loam, dhagax iyo quruurux; Altamira, beero canabku waxay 100m ka sarreeyaan heerka badda sariirta qadiimiga ah ee wabiga Tunuyan. Waxaa loo meeleeyay inay ku bislaadaan foostada geedkii (20 boqolkiiba cusub) 12 bilood oo abuuraya maadada tannins -ka oo aad u fiican. Foostooyinka waxaa sameeya Lafite Rothschild ee Faransiiska. Canabkii ugu horreeyay ee khamrigan wuxuu ahaa 2003. Khamrigan waxaa loo tixgeliyaa inuu leeyahay “aqoonsi Argentine iyo qaab Bordeaux” (Lafite.com).
Rafcaanka indhaha ayaa tan ka dhigaya khamri haddii casaan -guduudku yahay doorbidkaaga midabka. Sida sanqadhaha u wanaajiya khamrigu wuxuu soo bandhigaa kookaha, berde, miro guduudan iyo qorfe iyo ugu dambayntii midhaha madow ee dhaadheer leh geedkii oo kaalin taageero leh. Saacadaha furan (ama maalmo) ka hor cabbitaanka - hawo badan oo ay hesho, ayaa ka sii fiican waxay ka bixinaysaa dhadhanka iyo kakanaanta. Ku lammaan Barbeque, feeraha, sausage ama googoyn wan
• Bodegas Caro 2017. 74 boqolkiiba Malbec, 26 boqolkiiba Cabernet Sauvignon. Da'diisu ugu yaraan tahay 1.5 sano oo foosto ah, boqolkiiba 80 cusub.
Jooji! Waa inaad ku raaxaysataa midabka liinta madow ee quruxda badan ee khamrigan. Markaa, sankaagu ha qabto shaqadiisa… helidda isku -darka urta soo jeedinaysa raspberries, basbaaska madow, violets, xabo iyo shukulaato mugdi ah oo hodan ah. Tannins -ka jilicsan ayaa salaaxa dhadhanka waxayna isku daraan si macaan leh aashitada qaboojisa. Hilibkaaga la dubay ayaa kaaga mahadcelin doona saaxiibkiisa cusub.
Khamrigan ayaa leh wax soo saar xaddidan oo aan la horumarin sanad walba. Way yar tahay maxaa yeelay waxay ka timaaddaa qayb hoosaad ka tirsan argagixisada. Buuraha iyo roobku way ku yar yihiin Mendoza markaa marka roobku da'o - aad buu u culus yahay, ciidduna uma diyaarsan tahay inay nuugto dhammaan biyaha abuuraya wabiyada u soo qulqulaya Andes. Wabiyadu qarniyadii la soo dhaafay waxay abuureen taageereyaal raaxo leh oo gala webiga, waxayna taageerayaashu leeyihiin carro kala duwan oo aqoonta carrada muhiim u ah. Canabka Caro wuxuu ku koraa beero canab ah oo ku yaal meelo gaar ah oo uu abuuray ciidda hoose. Canabyadan waxay ku koraan carrada calcareous, oo ah nuurad, dhagaxa kalsiyumka hodanka ah. Khamrigu wuxuu ku duugoobay fuustooyin ka hor dhalada.